Shirka Cafinta Daymaha iyo Taageerada Soomaaliya oo kusoo dhamaaday Washington – Radio Daljir
Shirka Cafinta Daymaha iyo Taageerada Soomaaliya oo kusoo dhamaaday Washington
Abriil 20, 2018 2:51 g 0
Waxaa kusoo dhamaaday magaalada Washington ee xarunta dalka Mareykan shir looga arrinsanayay taageeridda Soomaaliya iyo cafinta daymaha lagu leeyahay, kaasi oo ay yeesheen dalalka deeq bixiyayaasha ee taageera Soomaaliya.
Wasiirka Maaliyadda ee Xukuumadda Faderaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaalle Bayle oo ka hadlay shirka ayaa sheegay inuu rajjo wanaagsan ka qabo in laga cafiyo Soomaaliya daymaha lagu leeyahay, isagoona sheegay in lagu qancay habka maamulka dakhliga dowladda usoo xarooda.
Wasiirka ayaa sheegay dowladihii shirka kasoo qaybgalay, Bankiga Adduunka iyo Hay’adda Amaahda Lacagaha ee IMF inay bogaadiyeen horumarka dowladda ay ka samysay hab maamulka maaliyadeed, ayna rajaynayaan inuu caalamka uu suoo jeedsado maalgalinta Soomaaliya iyo inay cafiyaan daymaha ay ku leeyihiin.
Soomaaliya ayaa waxaa lagu leeyahay balaayin doolar, taasi oo caqabad ku ah maalgashi caalami ah oo ay hesho iyo dib u dhis lagu sameeyo adeegyo badan oo dalka uu u baahanyahay.
Maamulka Degmada Luuq: “Hal qof ayaa ku geeriyooday fatahaadda webiga, khasaarena… (dhegayso)